काेराेना अपडेट : नेपालमा छाैँटाै व्यक्तीमा काेराेनाकाे पुष्टि :Nepal Bisesh
काेराेना अपडेट : नेपालमा छाैँटाै व्यक्तीमा काेराेनाकाे पुष्टि
April 2, 202011:00 am Nepalbisesh
नेपालमा थप एकजनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। टेकुस्थित राष्ट्रिय प्रयाेगशालामा आज गरिएकाे परीक्षणबाट उक्त पुष्टि भएकाे स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकाेटाले जानकारी दिए।
यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट संक्रमितकाे संख्या ६ पुगेको छ।
गत चैत ४ गते कतार एयरवेजको फ्लाइट नंं.- क्यू आर ६५२ बाट नेपाल आएकी अर्की एक महिलामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयद्वारा बिहीबार आयाेजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइएको हो। तर, उनी कुन देशबाट आएकी थिइन् र अहिले कहाँ छिन् भन्नेबारे जानकारी दिइएकाे छैन।
प्रवक्ता डा. देवकोटाले सङ्क्रमित व्यक्तिकाे थप विवरण लिने काम भइरहेकाे बताए। उनका अनुसार सोही जहाजमा आएका दुई जनामा यसअघि संक्रमण देखिएको थियो।
सोही जहाजबाट दोहा हुँदै फ्रान्सबाट आएकी एक र बेल्जियमबाट आएकी बागलुङकी अर्की युवतीमा पनि संक्रमण देखिएको पुष्टि भएकाे थियाे। फ्रान्सबाट आएकी युवती काठमाडाैंकी हुन्। उनी नेपालमा भेटिएका दाेस्राे सङ्क्रमित हुन्। ती युवतीकाे अहिले टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा उपचार भइरहेकाे छ।
यसअघि नेपालमा भेटिएका ५ जना कोरोना संक्रमितमध्ये एकजना उपचारपछि पूर्णरुपमा निको भई घर फर्किसकेका छन् भने चार जनाकाे उपचार भइरहेकाे छ।
नेपालमा सङ्क्रमित भेटिएका पहिलाे व्यक्ति चीनबाट आएका थिए, जाे उपचारपछि निकाे भइसकेका छन्।
दोस्रो संक्रमित व्यक्ति काठमाडौंकी १९ वर्षीया युवती हुन्। उनी फ्रान्सबाट दोहा हुँदै कतार एयरवेजको क्यू आर ६५२ जहाजबाट काठमाडौं आएकी थिइन्। उनमा चैत १० गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि सरकारले देशभर लकडाउन घोषणा गरेको थियो।
तेस्रो धादिङको, चौथो धनगढीको र पाँचौं बाग्लुङको व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ।
अहिलेसम्म काठमाडौं र काठमाडौं बाहिर गरी १ हजार १ सय ८४ वटा नमूना परीक्षण गरिएको पनि डा. देवकोटाले जानकारी दिए। ४३ वटा काठमाडौंमा र १२ वटा धरानमा नमुना परीक्षणको क्रममा रहेको तथा सैनिक अस्पतालले १७ वटा स्वाब लिएको पनि उनले जानकारी दिए।
डाक्टर देवकोटाका अनुसार १६ जना उपत्यकामा र ९९ बाहिर गरी मुलुकभर १ सय ५ जना आइसोलेसनमा छन्।